Barlammaan (Parliament) waa gole ama aqal awood sharci dajin leh oo dadwaynuhu soo doorto, waxaa kale oo la yaqaan golaha shacabka (ummadda) ama golaha shuurada. Qofka, barlammaan xubin ka ah waxaa loogu yeeraa; xildhibaan (parliamentarian). Magacu wuxuu ka koobmaa laba eray oo kala ah xil iyo dhibaan, haddaba xil waa:  xishood; sheex; sarriig.  wax ama hawl la qabanayo, wixii ceeb ah, oo ka imaan kara hadii la hagrado ama lagu gaboodfalo.  Ceebaal; fadeexo. Dhibaan oo ka soo jeeda, dhib oo ah: arrin ama hawl adag; hawl aan qabashadeedu fududayn).
Qofka isaga oo intaa og xil dhabarka u rita oo si qumman uga soo dhalaala ayaa ah, xildhibaan run ah. Xildhibaan nimadu ma aha, shaar galtibbax loo xirto ama Yaambo maalintacab loo sito. Sidoo kale, ma aha cirwayni dhinac kasta ah iyo hayeeshaale (yes man) in aad noqoto.
Barlammaan iyo nolol barlammaan ma aha tajriba soomaalida ku cusub. Italian soomaaliland kolkii lagu wareejiyay maamulkii (AFIS) wuxuu 1956-dii dhisay barlammaakii ugu horreeyay oo ka kooban 70 Dubutaati (Mudane) –magacyadii hore- soomaali tirdaa waxaa ka ahaa 63 inta kale waxay ka soo jeedeen jaaliyadaha ajnabiga ah oo dalka ku noolaa, sida Talyaani, Carab, Bakistaan iyo Hindi. Mudanayaasha qaar markay xilkaa diideen waxaa lagu ogolaysiiyay; “duco iyo habaar mid dooro”. Sidoo kale,1960-kii bishii febraayo, British soomaaliland, dawladdii Ingiriis waxay ka dhistay Barlammaankii ansaxiyay waqooyiga iyo koofurta soomaaliya in la isku daro, tiradiisu dhammayd 33 mudane, meelahaa.
Doorashadii xigtay waxay dhacday 1959-kii, wuxuuna ka koobnayd 121 kursi, kolkan Mudane nimadii –Dubutaati nimadii- waa la isla arkay oo, rag ayaa guryo iibsada, baabuur N3-ah -kuwa xammuulka gabolada u daabula- la soo dagay, xafiisyo Ganacsi furtay. Hotel Jubba iyo Shabeelle waxay noqdeen goobo ay ku caweeyaan Mudanayaashu. Barlammaankaa wuxuu ansaxiyay Dastuurkii 60-kii -dastuurkii wanllewayn ku caanbaxday- wuxuu doortay Madaxwayne iyo dawlad u taliya dal xor ah oo ururada caalamiga iyo kuwa goboleedka xubin ka ah, qawaaniinta dalka lagu dhaqay badankood iyaga ayaa ansaxiyay.
Kuraasta Barlammaanka oo ahayd 123 kursi oo gobollaada iyo dagmooyinka, loo qaybiyay, qabyaaladnna aan ka taganayn, ciddii buuxin lahayd dorashadooda ayaa sannadkii 1964-tii la qaabtay, ifafaalo boob iyo cod gadasho ayaa markan soo korodhay, Dubutaati nimadiina wax qarqaraka la wada haysto ayay isu rogtay. Sidii tolka loogu kala dhawaa oo loo kala lacag badanaa ayaa la isu khaarajiyay. Seejooyinkii (xarumihii) doorasha boob ayaa ka dhacay qaarkood, raggii axsaabta mucaaradka ah ka socday geedo salkood ayaa lagu qabbiray inta sanaadiiqda la cabbaynayo. Sidaa waxaa horseeday xisbigii S.Y.L oo ahaa xisbiga dawladda dhisay.
Doorashadii 1969-kii waa middii Kacankii 21 octobar dhalisay. Xisbigii S.Y.L oo dadqaad u xuubsiibtay ayaa kuraastii barlammaanka oo dhan 123 boobay. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo kaliya ama nin iyo laba- si fiican uma xusuusto- ayaa mucaarad iku haray. Waxaa soo baxay hal-ku-dhag ah; “ama la idooray ama daaku iqaad”.Gogortankii doorashada madaxwaynaha oo hawshiisa ugu badan ay ka dhacday “Baar Naaso Hoblood Km4” wixii darteed Jeegag lacageed loo saxiixay nin nasiib leh oo hore ka caddaystay mooyee ragga intiisa badan ma calfan.
Xukuumaddii Kacaanku, laba jeer ayay qabatay doorashada xubnaha Golaha Shacabka. Golihii dhexe oo XHKS, isla markaana ah golihii wasaaradaha iyo xubnno lagu kordhiyay oo magacaabid ku yimid, 171-tan xildhibaan meelahaa ayaa Golaha Shacabku ama Golaha Sacabku, sida dadka qaarki ku xanteen. Golaha Shacabku xukuumad shaqaysa ayuu qayb ka ahaa.
Tuulada Carta/Jabuuti sannadkii 2000-un waxaa lagu doortay Madaxwayne iyo barlammaan tiradiisu dhantahay 245 xubin. Nasiib darro, iyada oo aan dhinacyo kala duwan arrinta laga darsin ayaa madaxwaynihii, wasiirkii koowaad iyo barlamaankii Muqdishow afka looga shubay. Mooryaan u dhakatay ayaa sare ugu kacday oo waqti gaaban hareeraha kala soo wareegtay. Dad iyo dal ay waxa taraan daaye, iyagii ayaa gacan ku gabbad iyo reer (qabiil) isku leexin ka dhammaan waayay. Ilduufkaa waxaa wax laga saaraa raggii mas’uulyidda soo qaaday qaarkood. Muddo gaaban saddexdii awoodood oo kala duwanaa, waxaa laga dhigay tagoog muruqii laga la baxay.
Magaalada Nayroobi xeradii Empagathi 2004-tii waxaa lagu dhoodhoobay waxa barlammaanka loogu yeero oo ku ragaaday Baydhabo gobolka Bay. Barlammaankan tiro ahaan waa kii ugu badnaa (275 xubin) oo shacabka soomaaliyeed soo mara, tayo ahaanna waa kii ugu liitay oo arloda laga dhiso. Qabqablle dagaal, oday dhaqameed, safiirka Itoobiya iyo safiirka keenya ninkii ay ku tufaan oo qora ayaa xildhibaan noqday, marka laga reebo dhowr ruux oo cadkooda la liqi kari waayay.
Haddaba, xubnaha barlammaanka midkiiba wuxuu fadhigiisa ku qaataa 1.200.00 oo dollar oo soomaaliya joogta. Cali iyo Caasho toona ma masruufo oo carruutii iyo xaasakii ama waa qaxooti dibadaha ku nool ama waxay joogaan gobollada kale oo dalka masruuf iyo marashi toona kama sugaan xildhibaanka.
Qiimaha codku sicir joogto ah uma go’nna oo, waa sida Doollarka Maraykanka mar waa hoos marra waa kor. Bal, soo qaado codkii kolsoonda lagu siiyay dawladda Nuur-cadde; qiimuhu waa fiicnaa waxaase ka siifiican mashruucii ay isaga hor yimaadaan madaxwaynaha iyo wasiirka koowaad. Gorgortanku samada ayuu isku shareeraa oo, naadadu sare ayay u kacdaa, kam yasiir iyo kam yaguul, dabadeed dhankii wax dheeraada ayaa lagu baariyaa naadada. Laba canlayn lagama xishoodo waana fursad dhaqaale badan lagu kasbo. Mashaariicda, sida qaanuunka saxaafadda, qiimo saas ah ma laha, waa raashin ku sugid (antipasta), mana gooyaan qayillaadda maalinkaa wax dhaafsan.
Ciriiri hoyga awgi ah, xildhibaanku wuxuu dagan yahay Hoteel, wuxuuna saaranyahay miis cunno loogu kariyo oo dhawr qof ay ku shirkoobeen. Maalin kasta miiska waxaa lagu bireeyaa neef ama laba neef oo ari ah. Lacagta aan sare ku sheegay ama lacagtii ka soo gasha cod u gadmay; 2/3 waxay ku baxdaa jaad, dibnna waxay ugu laabataa Keenya oo ay fadhiyaan haya’dihii laga soo shaxaaday.
Xildhibaan kasta wuxuu biil dayn ah ka saaranyahay mafrash haweeneey xildhibaan ah u furan. Bishu 30 markay tahay mushaarka uu qaato, wuxuu la dhex fariistaa mafrashka, halkaa ayuu ku kala qaybiyaa, haddii daalac lagu yeesho, safar soo dhow ayuu ku ballamiyaa.
Xildhibaanka maalinkiisa shaqo wuxuu ka bilowdaa; hurdo dirqi looga kacshay, indhaha biyo inta marmariyo ayuu bakhaarkii ADC-da isa siitaagaa. Dhowr mir oo sigaar ah iyo kafee fara badan oo uu islee yahay ku toos kolkuu isdabadhigo ayuu xoghaynta waydiiyaa; wax lacag ah ama wax lacag gooya in ay soo dheceen?!. Wax-hel ama wax-waa, mid loogu jawaababa, waa dhaqaajiyaa, intaan qorraxdu soo kululaan, miiskii raashinka ayuu dul tagaa. Maraq kulul oo geedaysan, awlal suuf cad ah iyo xeero bariis ah oo sabiib, qorfe, heyl iyo basal la kariyay la dul saaray, deg-degg inta u mariyo ayuu isga oo findhicil ilkaha ku sita, dharrag ba’an darteed neeftuuraya, iska xaadiriyaa mafrashkii heblaayo. “Intaydi isugu soo kay xir’”; ayuu yiraahdaa isaga oo meel u cayiman salka siidhigaya, sidiisaba wuxuu ka dakeeyaa midigta.
Durba waxaa soo gala wiil yar oo meheredda u tababaran aadnna u xoog furan oo, isku sida; jaad shan ilaa lix marduuf ah oo haraaq cad ku duuban, tarmuus shah ah, laba koob, mid biyo iyo mid shaaha, dambasqaad iyo caag biyo ah. Jaadka inta uu haragada ka furfurayo wuxuu ku ducaystaa;“maa saraqnaa, wamaa nahabnaa, walaa ishtaraynaahu bil maalilqabiix, Ilaahoow waa quud Awliyee yuu na qoomin oo ah; (sooma aannan xadin, sooma aannan boobin lacag meel xun ka soo jeedda kuma aanan gadan, Ilaahoow waa quud Awliyee yuu na qoomin. Aamiin, Aamiin).
“Akram, waa laan boqor”; wuxuu ku tuuray xildhibaan hortiisa ka soo jeeda oo Guddoomiye ka ah guddiga “Anshaxa Bulshada” oo barlammaanka.
Fadhi-ku-dirirkii halkaa uu ka bilaabo, wuxuu hakad galiyaa 2-da jeer oo British Broadcasting Corporation soo gasho oo kaliya (salaad warkeeda kuma jiro). Laba iyo tobanka habaynkii (00:00) waxaa bilowda barnaamajkii nuska dambe iyo liilalaw-dii. Sacadahaa, hawlaha daca waa kuwo shareecada islaamka meel ka dhac ku ah oo munkarra iyo fuxshi ku salaysan, anshaxa bulshadana ka baxsan. Carruur yar-yar oo gaajo la qooxmay (la gotay), rafaad iyo diif fara badanna dhafoorkooda ka muuqato ayaa mafrashka lagu soo daayaa. Middi habaynkaa uu ku nasiibsaday, inta gacanta ku soo dhago ayuu labadiisa bowdo dhex fariisiyaa:
“Xabiibiibii, laamo gaagaaban oo jilicsan afka iigu gur”, war iyo waxtar halkaa ayuu ka bilaabaa!.
Adeer; “aabbe iyo hooyo halkee ku noolyihii?!”, ayuu waydiiyay isaga oo fadhiga sallaxanaya.
“Adeer, labaduba waa dhinteen” ayay tiri iyada oo hoos eegaysa, illin kululla indhaheeda yar-yar ka tiraysa.
“Maxay u dhinteen?!”, ayuu waydiiyay isaga oo aan wax danqasho ah u muujin laamo cas-casna afka sii gashanaya.
“BM, BM, BM” aya israacisay iyada oo madaxa lulaysa codkuna sii xirmayo.
“BM, saay ah, xabiibii?”, ayuu waydiiyay isaga oo xabad sigaar ah afka u galinaya.
“Midka xabashidu soo ganto” inta tiri; ayay cantoobo jaad ah nacdiir iyo ha kaa aamuso afka ugu galisay.
“Maxaad ku nooshahay?!” ayuu waydiiyay; isga oo jaadkii labada can u qaybinaya, qaar afkiisa ka soo daatayna sacabbada ku celcelinaya.
“Barta aan aal, wixii aan ka helo”, labadiisa lugood oo ku hareeraysan ayay u tilmaantay.
Tarmuuskii shaaha isaga oo laacaya ayuu yiri; “adeer, gabdho quruxdaada oo kale leh ma kula dhasheen?.”.
Ficil iyo dhirif iyada oo muujinaysa ayay tiri; “wiilal amxaarta bireeya ayaa iladhashay”.
Mar kale, waakan wiilkii mafrashka oo, dhowr marduuf oo uu doonaya in uu khaarajiyo rogrogaya. “Yaroow sheen iyo suuldhabaale inta israacayay ayuu yiri;“bal, saddexdaa sooduw, middan cesho, mise iskaddaa”.
“Ballo ku cuntay!, waa kii la yiri; ha la cuno!. Bal daya sida laamihiisu u laalaab mayaan!, wallee, waa hubaa oo midkan beerta biddix xigta ayaa laga soo guray”!
Bac wayn oo dhiniciisa tiil inta soo jiday oo is hordhiga ayuu cajaladihii baaray, mid inta la soo booday oo lulay ayuu yartii inta ku jeestay yiri; “canjalkan ma taqaan?, waa albumkii ugu dambeeyay oo Lafoole, adeer, ku rid!”.
Xildhibaanku, meermeerkaa (routine-kaa) wuxuu ku jiraa sannadka oo idil, sida, rati macsaro shiida; wax ma arko, wax ma maqllo,, ma daalo, ma shakiyo oo nolosha qaabkaa ku socota kama sheegto. Meherad intaa dhaafsan Baydhabo uma fadhiyo. Xilkii dhibta badana, oo loo dhaarshay wuxuu ku soo koobay; dhafar, fisqi iyo gorgortan (baayacaad). Barlammaan keennu waa kaa, xildhibaanna waa kaa!. Runtii, kuwaas, waa u dhammatay.
Aadanuhu meel uu joogaba xoolaha oo ka liita in uu tilmaan (sifo) u qaato ceeb uma yaqaan oo, waxaad maqashaa; hebel waa libaax libaax dhalay, Good, Shinbir, heblaayo Qalanjo iyo axadku ballaranaa ma Maroodi baa?. Sidaa darteed, la yaab ma ah haddaan idiin soo tabiyo sheeko, nin oqoonyahan ah oo aan saaxiib ahaan jirray, aadnna u jecla in uu tilmaan (sifo) lagu fahmo raaciyo, markuu arko dad doorsan. Farta inta ku fiiqo ayuu oran jiray; “kuwaas ma u jeeddaan?!, waxay lee yihiin dhaqanka Doorshaanka (xaarwalwaalka) oo kale”. Markii la yiraahdo, bal noo fasir oo, maxaad ula jeedda?!, wuxuu oran jiray:
“Doorshaanku waa cayayaan ku nool wasakhda oo waxa udgoon neceb. Wuxuu dheefsado wuxuu ugu xiisayn badan yahay wasakhda ka timaadda; aadanaha ama xoolaha, sida; saxarada, saalada, digada iyo faantada ama dhiriqda. Waxaas kolkuu helo, marka hore waa kuus-kuusaa, sida kubbadda oo kale, markuu isu geeyo ayuu lugaha dambe oo ka dheer labada hore iyo labada dhexe dib ugu dilin-dilleeyaa si uu godkiisi u gaysto. Inta hawshaa dilindillaynta (riixidda) uu ku jiro, madaxa iyo qaarka hore hoos iyo dhulka ayuu u laalaadiyaa oo, wixii uu walwaalayay xagga dambe ayuu iska mariyaa (gadaal). Waxa uu riixayo, oo ah wax uu ka sii jeedo meel ay ku abbaaranyihii iyo meel ay marayaan war uma hayo. Mar waxbaa xanniba, marar badanna haadaan inta ka tuurro ayay kala lumaan. Baaris hawl badan dabadeed, wuu soo helaa. Ha yeeshee, shilkii dhacay wax kuma qaato oo, sidii iyo qaarka dambe ku riixid ayuu ku noqdaa. Silic iyo kadeed isaga oo ka dhargay oo, faro maran ayuu gabbalku kolkuu sii dhacayo godkiisi u galbadaa. Wasakhdii uu soo uruursaday mahayo, rafaadnna waa kurorsaday!”.Wasakh quud in laga dhigto, hawlla qaabkaa loo maareeyo ayaa ah; dhaqan Xaarwalwaal (Doorshaan).
Runtii, been idinku jalbeebin mayo, xin iyo cambaaraynna iga ma aha oo, “Barlammaanka soomaaliyeed oo fadhigiisu yahay Baydhabo wuxuu ansixiyay ama ka dooday mooshin la soo hordhigay”, kolkaan maqllo, waxaan soo xusuustaa sheekadaa iyo saaxiibkay. Ragga iyo haweenka, meeshaa fadhiya waxa ay qaayibeen (u bogeen) waxfoolxun oo jirku ka jiriiricoodo, waliba sarriig waa la isdhaamaaye, waxaa ugu daran kuwa gacan-taagga iyo hungurigooda isku xiray, inkaar bay qabaan.
Carrada wali rag iyo haween tilmaantaa aan mudnayn oo, xeel iyo awood ay hagradeen aan lagu xaman oo ku xayiran Baydhabo, sababo kala duwan awgood ayaa jira. Ikhyaartaa, ha ku lab dagaan halkoda iyaga oo jooga in ay soomaali kolsooni buuxda ku dhex lee yihiin.
Ma illoobin karo, gacan salaameed in aan halkan uga diro xildhibaannada dun wanaagga u dhashay, waddan jacaylkuna dhiiggooda ku jiro oo, kolkay u soo urtay basar xumada la soo maagan yahay iyo dalkii in cadaw-soo-jireen ah gacanta loo galinayo, gambiyay. Sidoo kale; “uf yiri”, quursi iyo ihaano soo socota.
Ragga iyo haweenkaa tacabasho quursi leh waxay ka door bideen gaajo xarrago leh, nolol gunnimo leh waxay ka soo dhawaysteen, geeri warsan iyo magac ka haro. Raggaa iyo haweenkaa waa kuwa ku sifoobay “Barlammaanka xorta ah” oo ku dhiirraday walaalahood; Midawga Maxkamadaha Islaamiga, Qurbejoogta iyo Bulshada Rayidka ah oo intaba dhabbaha halganku kulmiyo; in ay wada dhisaan: “Isbahaysiga dib-u-xoraynta soomaaliya”.